Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Khamiis Ah 16 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo khamiis Ah 16 June
June 16, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds United iyo England Kalvin Phillips, 26, ayaa u sheegay kooxda inuu doonayo inuu ka tago xagaagan si uu ugu biiro Manchester City . Insider
City ayaa aaminsan in dalab ku kacaya 45 milyan ilaa 50 milyan ginni ay ku qancin doonto Leeds inay iibiso, waxaana la filayaa in Phillips uu riixi doono inuu dhaqaaqo marka dalab miiska la soo saaro.
Wakiilada ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa ku dhow inay dhameystiraan heshiis afar sano ah oo ay ku doonayaan 29 jirka reer France inuu beeca xorta ah ugu biiro Juventus . Sky Sports
Juventus ayaa filaysa in Pogba uu heshiis la saxiixdo bilawga bisha soo socota kadib markii ay heshiis afka ah gaadheen. Masuul
Tottenham , Newcastle iyo Aston Villa ayaa ka mid ah kooxaha Premier League ee isha ku haya weeraryahanka Wales Gareth Bale, oo 32 jir ah, kaasoo ah wakiil xor ah ka dib markii uu dhacay qandaraaskiisa Real Madrid dhamaadka xilli ciyaareedkan. Sun
Chelsea ayaa laga yaabaa inay weyso bartilmaameedka mustaqbalka fog ee Jules Kounde iyadoo daafaca reer France ee Sevilla , 23, uu haatan wadahadalo horumar leh kula jiro xagaagan Barcelona . Mail
Chelsea ayaa bilowday wadahadalo ku aadan heshiiska amaahda ah ee Romelu Lukaku uu ugu soo laabanayo Inter Milan , laakiin 29 jirka reer Belgium ayaa u baahan doona inuu dhimo mushaarka. Telegraph
Inter ayaa kalsooni ku qabta inay heshiis la gaarto Lukaku, inkastoo ay ku kala duwan yihiin 5m euros (£4.3m) ee qiimaha amaahda ah ee kooxaha. Sky Sports
Wada xaajoodka Lukaku waxaa gacan ka geysan kara in Chelsea ay heshiis joogto ah la gaarto daafaca Inter ee Netherlands Denzel Dumfries, iyadoo Blues ay muujisay xiisaha ay u qabto bartilmaameedka Manchester United , 26. Gazzetta dello Sport – in Italian
West Ham ayaa aad u doonaysa saxiixa xiddiga Southampton James Ward-Prowse, Newcastle ayaa sidoo kale xiiso u qabta xiddiga khadka dhexe ee England oo 27 jir ah. Mirror
Everton ayaa dhameystirtay saxiixa daafaca reer England James Tarkowski, oo 29 jir ah, isagoo si xor ah uga soo biiray Burnley laakiin heshiiska lama filayo in lagu dhawaaqo ilaa dhamaadka June. Liverpool Echo
Manchester United ayaa ugu cadcad saxiixa 24-jirka khadka dhexe ee Porto Vitinha, kaasoo qandaraaskiisa lagu burburin karo 40 milyan euros (£ 34m). Abola
Madaxweynaha Porto ayaa sheegay in dalab ka yimid koox aan la magacaabin oo ku aadan Vitinha la diiday, kaasoo sidoo kale ay dooneyso Arsenal . Express
Nottingham Forest ayaa heshiis la gaartay Manchester United si ay amaah ugula soo wareegto goolhayaha 25 jirka ah ee Ingariiska Dean Henderson, iyadoo ikhtiyaar ay ku iibsan karto 20 milyan ginni. Mail
Kooxda dhawaan soo dalacday Premier League ee Forest ayaa doonaysa Henderson oo qayb ka ah 100 milyan ginni oo ay suuqa galisay. Times
Rajadii Manchester United ay ka qabtay saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Frenkie de Jong, oo 25 jir ah, kana yimid Barcelona ayaa la kulantay dharbaaxo xun ka dib markii kooxda reer Spain ay sheegtay inaysan u baahnayn inay iibiso ciyaartoy xagaagan. Mirror
United ayaa rajeyneysa in Andreas Pereira uu ku laabto Old Trafford ka dib markii uu amaah kula joogay Flamengo , kuwaas oo aan wax niyad ah u qabin inay u isticmaalaan 10.5m euros dookh ay ku iibsan karaan. Fabrizio Romano
West Ham ayaa eegaysa Rennes 26 jirka daafaca dhexe ee Morocco Nayef Aguerd si ay ugu xoojiso daafaceeda. Telegraph
Laakiin Hammers ayaa ka cabsi qabta in Newcastle ay qarka u saaran tahay inay 30 milyan ginni ku afduubato Aguerd. Stars
Juventus ayaa laga yaabaa inay daafaca dhexe ee Turkiga Merih Demiral, 24, u soo bandhigto Chelsea , taasoo qayb ka ah heshiiska ay isku dhaafsanayaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Italy Jorginho, 30. Calciomercato
Arsenal ayaa wali la soo saxiixan karta xiddiga khadka dhexe ee reer Spain ee Marco Asensio, oo 26 jir ah xagaagan iyada oo uu wali taagan yahay muran ku saabsan mushaharkiisa kooxda Real Madrid . Mirror
Asensio oo qandaraaskiisa hal sano uga harsan yahay ayaa jeclaan lahaa inuu sii joogo Real Madrid laakiin wuxuu aaminsan yahay inuu u qalmo mushaar kordhin. Marca
Real Madrid ayaa rajeyneysa inay lasoo saxiixato 18-jirka khadka dhexe uga ciyaara Borussia Dortmund ee Jude Bellingham, inkastoo kooxaha Premier League ee Manchester United iyo Liverpool ay ku tartamayaan heshiis 78 milyan ginni ah. Metro
Southampton ayaa heshiis la gaartay Manchester City si ay ula soo saxiixato goolhayaha Irish Gavin Bazunu, 20. 90min
Bournemouth ayaa ku dhow inay la soo wareegto daafaca reer England ee West Ham Ryan Frederick, laakiin Fulham ayaa sidoo kale xiiseyneysa 29 jirkaan. Insider